Sida loo Play regelingen on iPhone Si fudud
> Resource > iPhone > Sida loo Play regelingen on iPhone
iPhone ma ciyaari karo files regelingen natively. Waa hagaag, waxa aad sameyn karto haddii aad rabto in aad ka ciyaaro qaar ka mid ah regelingen files audio on iPhone? Xalka ugu wanaagsan waa in la badalo regelingen si iPhone qaabab natively taageerto. Ma jirto wax sabab ah oo wanaagsan loo sameeyo. Aad u ogaato, files regelingen aad ka imaan karaa ilo kala duwan, xitaa qaar ka mid ah waxaa ilaaliya DRM. Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) badalo karo files regelingen nooc kasta si iPhone qaabab si buuxda u socon, oo ay ku jiraan ay ka saareen ilaalinta DRM ka files regelingen ah. Hawlaha qaab beddelidda ma ka dhigi doonaa wax khasaaro audio. In eray, aad awoodo inuu ciyaaro file regelingen wax ku iPhone effortlessly iyadoo la kaashanayo barnaamijka weyn.
Ma waxaad weli heli murugsan ee dhibaatadan "iPhone ma ciyaari karo files regelingen"? Isku day Video Converter Wondershare, taas oo run ahaantii iska heli kartaa dhibaato si fudud.
1 Import regelingen files si regelingen si Converter iPhone
Mid ka mid ah habka ay u dajiyaan files regelingen waa in ay si toos ah riix batoonka Add Faylal ay ku bar menu this app ee. Markaas, waxaa laguu keeni doonaa xitaa your computer iyo dooran faylasha aad rabto in aad u diinta. Si kale ee ku shuban aad files regelingen deegaanka waa in la helo files regelingen diirada ku PC ugu horeysay, ka dibna jiidi oo iyaga hoos u Murayaad diinta this app ee.
Fur qaab saarka suuqa kala hoos-hoos ee guddiga Qaabka Output ah, ku dhuftay tab Device ugu sarreeya ee widnow soo socda, markaas, u tag category Apple ah, iyo ugu dambaysta, dooran model iPhone aad.
Ogsoonow in ay jirto qaab kale oo wax soo saarka waxaad dooran kartaa. Sida la og yahay in dhan, MP3 si buuxda u la jaan qaada iPhone nooc kasta. Sidaas halkan, waxa kale oo aad dooran kartaa MP3 format sida wax soo saarka. Tag "qaab"> "Audio"> "MP3" halkii.
3 Play regelingen on iPhone
Ugu dambeyntii, u tag geeska gacanta midigta hoose ee suuqa, ka dibna waxaa riix badhanka loogu badalo ka. Hadda, aad mar hore bilaabay in ay diinta ka regelingen iPhone. Dhamaan hawlaha la samayn doonaa dhowr daqiiqo ka dib. Haddii aadan rabin in la sugo, ha iska ordo ee asalka ah.
Marka uu sameeyo, la helo files gediyay sida ay Output Jidka Folder ama ay si toos ah garaacid ikhtiyaarka Folder Open hoose. Tallaabada ugu dambeeya waa in la hagaagsan files wax soo saarka si aad iPhone u madadaalada.